May 2014 - Vanoda Zvinhu
Kusvirwa naGarden Boy
Kwaitonhora musi wacho uyu . Ndaingonzwa pombi yemugarden ichiti pfaa nemvura . Ndakamuka pamubhedha ndikadongorera nepawindow , Iweeeee Ndakaona Tichaona , mukomana wemugarden achitunda . Ndaifanira kutsamwa apa nokuti aitotundira mulawn mangu mufunge . Asi zvandakaona apa zvakandivhundutsa kwazvo . Muviri wangu wakabva wati rukutu kuneta . Mukomana aiva nemboro iyeyu .…
Kubatwa nemukadzi wangu ndichisvira secretary kubasa
Wadiwa SekuruSekuru;mungaone zvenyu kufara kwandiri kuita mukati zvinhu zviri kundifambira .Pane nyaya yakaitika kwandiri marumwezuro zvekuti handizivi kuti ndogarisana sei nemudzimai wangu amai Chantel. Nyaya yacho yakaitika hatisi kumboitaura nezvayo saka zvaakutondinetsa.Nhasi Chitatu asi nyaya iyi yakaitika nemuvhuro.Sezvamunozivawo, ndinerombo rakanaka rekuti ndinebasa rakanaka repamusoro rinokuridzira kuti ndive eanondibatsira(secretary)uyezve…
I was 24 just finished B.Acc ndichangotanga ma articles ne imwe firm mu harare ,ndaigara mu ma avenues pa flat pandaigara there was this guy aishanda ku Delta taingopesana pa ma steps achipinda in his room . One saturday evening was doing nothing so thought of going to watch…
Kusvira mukadzi wemunhu arikuDRC
hiiiiii!!! dadddddddy saka ndizvo zvamunoita kumukadzi wenyu here izvi amaiii kani ari munhamo hey! wandikwadza kani, yaka kurisa kani maiweeee! Ndini uyo, ndari funga beche, mudzimai wangu ari kumusha, and the bad part of it,it was on a Thursday,apo one of my friends invited me the previous night…
Malessons eChinamwari for Ladies
The Leg Glider position Position iyi is best enjoyed kana achingoisa musoro wemboro yake chete (yatinoti Shallow strokes pachirungu, hamheno kuti imi munogara muma location munoitii). Tell him kuti urikuda musoro wake. Musoro wemboro contains hundreds of nerve endings making it the most sensitive part ye mboro yake.…
Today’s bedroom position is called The Froggy Style. Ma Big House please take note because ndimi ka musingafarire ma position akawanda. Murume wako will enjoy this one bcoz anenge ane good view of magaro ako & he can see them achi shaker shaker. Ndakambokuudza kuti men r visual creatures…
Murume anga asingazive beche
Zvino ndokunge kuine mumwe mukomana ainzi John, raiva duutuu rokupedzisira. Mukomana uyu akasvika pakuita tsvimborume asina mukadzi uye asina kana kumbotamba nemusikana zvisina kunaka. Hama dzake dzakanga dzototambudzika zvokuti dzakafunga zano rokumutsvagira mukadzi wokuroora. Sezvineiwo mudunhu umu maive neumwe musikana akanga ava tsikombi asi achine mazaimbikiti emazamu asina…
Her bfrnd was cheatin so sh decided sh wantd a revenge f**k. And who else to gv a btfl and horny 19 yr old a mighty gud f**k sh will never 4get? Doctor ofcourse. Mwana akanaka iyeye, sh was th personification of the word beauty. Whoever came up wth…
Revenge: Kusvirwa nebest friend yemurume wangu
…They should ban it..verengai unzwe I got married at age 20, it was more because i had gotten pregnant and he chose me over the other pregnant girl. At that time i took it to mean he loved me and that his making the other girl pregnant was a mistake.…
PHASE 1 Ndaive mu surgery ndobva kwapinda mudzimai aive around late twenties. Ndakamutarisa achiuya kuteburu kwandaive ndigere achifamba zvinyoronyoro nemakumbo matsvuku anoyevedza akakwana, aiva murefu zviri pakati nepakati akavakwa zvinonwisa mvura zvekuti waiona panotangira hip kana chiuno chake zvichidzika kuita round figure uye aiva asina chimimbamuteku. Ndakaramba ndakayeva…